Isku-aadka tartanka 2012 CECAFA Cup oo la sameeyay | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Isku-aadka tartanka 2012 CECAFA Cup oo la sameeyay
Posted By ilwareed on Tuesday, November 13th 2012 08:14 EAT
Isku-aadka xulalka ka qeyb galaya tartanka kubbadda cagta ee dalalka Bariga iyo Bartamaha Afrika ayaa maanta lagu sameeyay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda oo lagu qaban doono cayaaraha.
Xulka kubbadda cagta Soomaaliya ayaa ka mid ah 12 dal oo sanadkan ka qeybgalaya tartanka CECAFA. Jabuuti oo sheegtay inaysan sanadkan ka qeyb gali karin waxaa lagu beddelay Malawi.
Saddex is-arag (group) oo midkiiba ay ku jiraan afar dal ayaa loo qeybiyay xulalka. Wareegga labaad waxaa la qorsheeyay inay u soo gudbaan 8 dal, iyadoo labada xul ee ugu dhibcaha badan group kasta ay u gudbanayaan wareegga labaad, iyadoo xulalka gala kaalmaha saddexaad laga soo qaadan doono labada ugu dhibcaha badan.
Tartanka oo socon doona 24-ka November ilaa 8-da December ayaa xulalka waxaa la isugu aaddiyay sidan:
Group A: Uganda, Kenya, Ethiopia iyo South Sudan.
Group B: Sudan, Tanzania, Burundi iyo Soomaaliya.
Group C: Rwanda, Zanzibar, Eritrea iyo Malawi.
Dhammaan kulamada waxa ay ka dhici doonaan labo garoon oo ku yaalla magaalada Kampala oo lagu kala magacaabo Nmaboole Stadium, oo qaada 45 kun 202 qof iyo Nakivubo Stadium, oo qaada 15 kun oo qof.
Kulanka ugu horreeya ee furitaanka waxa uu 24-ka bishan November dhex mari doonaa Ethiopia iyo South Sudan.
Tartankaan waa kii 36-aad oo ay CECAFA qabato tan iyo markii la billaabay sanadkii 1973-kii.
Uganda oo martigelinaya tartanka sanadkaan waa dalka heysta ama difaacanaya oo ku guuleystay isla koobkan sanadkii hore 2011, sidoo kale waa xulka koobabka ugu badan ku guuleystay wuxuuna qaaday 12 jeer.
South Sudan waxay u tahay markii ugu horreysay tartanka CECAFA.
Soomaaliya waa markii 22-aad oo ay tartankaan ka qeyb galeyso.
Kulanka ugu horreeya ee xulka qaranka Soomaaliya wuxuu la cayaari doonaa Burundi 25-ka November, kulanka labaad waxa ay is arki doonaan Sudan 28-ka November, halka kulankooda ugu dambeeya ee qeybta B ay 1-da December ku kulmi doonaan Tanzania.
Xulka Soomaaliya oo lagu naaneyso ‘Ocean Stars” ayaa jimcadii (9-ka bishaan) u duulay Uganda halkaas oo uu tababar ku qaadanayo.
Tartanka sanadkaan waxaa lagu magacaabay CECAFA Tusker Challenge Cup, kaddib markii ay shirkadda Tusker qaadatay qandaraaska maalgelinta tartanka ee sanadkan.